Ibhande elihambayo liyingxenye eyinhloko yokuhambisa ibhande. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukuthuthwa okukhulu okuqhubekayo emikhakheni yamalahle, yezimayini, yokusansimbi, yamakhemikhali, yezokwakha neyezokuthutha. Izinto ezizothuthwa zihlukaniswe ngamabhuloki, izimpushana, amapasta nezicucu. Izinto njll. Ibhande elihambayo ngokuyinhloko lakhiwe izingxenye ezintathu: izinto zohlaka, isendlalelo sokumboza nezinto zokwenza ibhodlela, okumboza ungqimba nohlaka lohlaka okuyizinto eziyinhloko ezinquma ukusebenza kwalo.
Ngokuya ngezinto ezehlukene ezisetshenziswe kusendlalelo sokumboza, ingahlukaniswa ngezigaba ezimbili: amabhande asindayo okusindayo namabhande okuhambisa akhanyayo. Amabhande okuhambisa umthwalo osindayo asebenzisa irabha (kufaka phakathi injoloba yemvelo nenjoloba yokwenziwa) njengezinto ezibonakalayo ezingavuthiwe, ngakho-ke zibizwa nangokuthi amabhande okuhambisa injoloba, futhi ukusetshenziswa kwawo kugxile emkhakheni wezimboni ezisindayo nokwakhiwa kwengqalasizinda. Ngokuya ngokusetshenziswa okwehlukile, amabhande enjoloba angahlukaniswa abe ngamabhande wokudlulisa kanye namabhande wokuhambisa. Esokuqala sisetshenziselwa ukudluliswa kwemishini, kanti esezansi isetshenziselwa izimboni ezidinga ukudluliswa njengezimoto nemishini yezolimo; lesi sakamuva sisetshenziselwa ukuthuthwa kwezinto ezibonakalayo, futhi okufuneka kakhulu kugxilwe ezimayini zamalahle, Izimboni ezinhlanu ezinkulu zensimbi, amachweba, amandla nosimende. Amabhande okuhambisa engasindi ikakhulukazi asebenzisa izinto ze-polymer, ezisetshenziswa kakhulu emikhakheni yezimboni elula njengokudla ne-elekthronikhi.
Imboni yebhande le-rubber conveyor inomlando omude wokuthuthuka, ubuchwepheshe obuvuthiwe, kanye nokuhlinzekwa kwezinto zokusetshenziswa kanye nezidingo eziqinile zokuvikelwa kwemvelo kwamazwe athuthukile. Njengamanje, izindawo zalo zokukhiqiza ikakhulukazi amazwe asathuthuka. I-China ingumkhiqizi webhande elihamba phambili enjoloba emhlabeni. izwe.
Kulesi sigaba, imboni yebhande lokuhambisa umhlaba isheshisa ukudluliselwa kwayo emazweni asathuthuka.
I-China yizwe elihamba phambili ukwenza ukudluliswa komkhakha wamabhanti wokuhambisa wamazwe omhlaba. Izizathu eziyinhloko yilezi: izindleko zokukhiqiza zasekhaya ziphansi kakhulu kunamazwe athuthukile; I-China isiphenduke imakethe yokukhiqiza nokusetshenziswa kwebhande elihamba phambili kunawo wonke emhlabeni, kanti nezinga lokukhula emakethe liseseqhulwini lomhlaba. Imboni yebhande elihambisa izinto zasekhaya Ngokuthuthuka okusheshayo, ezinye izinkampani embonini zikwazile ukukhiqiza imikhiqizo ngokusebenza kanye nemininingwane efinyelele ezingeni eliphakeme lamazwe omhlaba, futhi inamandla okwenza ukudluliswa kwezimboni.
I-China, iBrazil kanye namanye amazwe asanda kuthuthuka asemkhankasweni wokufudukela emadolobheni kanye nowezimboni. Ukuthuthuka okusheshayo kwezimboni zabo ezisindayo nezamakhemikhali kunikeze imakethe eyanda ngokushesha embonini yebhande elihambayo futhi kwaheha izinkampani eziningi ukungena embonini yebhande elihambayo. Izici eziyinhloko zemakethe yebhande elihambayo emazweni asanda kuthuthukiswa ukukhula komakethe okusheshayo, izinkampani eziningi zokukhiqiza, kanye nokuhlushwa kwezimboni okuphansi. Njengamanje, amazwe asanda kuthuthukiswa abe ngumkhiqizi omkhulu nomthengi wamabhande okuhambisa emhlabeni. Phakathi kwabo, iChina isibe ngumkhiqizi nomthengi omkhulu kunabo bonke bamabhande okuhambisa, okukhipha okubalwa cishe ingxenye eyodwa kwezintathu yomkhiqizo ophelele emhlabeni.
Ukuqhamuka kwamabhande ahambisa izinto kunikeze umfutho omkhulu ekukhiqizweni kwezimboni futhi kukhuthaze ukuthuthukiswa kwezimboni ngezinga elikhulu. Wonke umuntu kufanele azi ukuthi iChina yizwe elinesidingo esikhulu samabhande okuhambisa, ngakho-ke izwe lethu futhi liyizwe elikhulu ekukhiqizeni amabhande okuhambisa.